မြန်မာလို VB6 စာအုပ်လေး - MYSTERY ZILLION
မြန်မာလို VB6 စာအုပ်လေး
November 2010 edited March 2011 in VB6
မြန်မာလိုရှင်းပြထားတဲ့ VB6 စာအုပ်လေးကို အောက်ပါလိပ်စာတွင် သွားဒေါင်းနိုင်ပါပြီဗျာ။ ကျွန်တော့်စာအုပ်မဟုတ်ပါဘူး။ အခြားသူငယ်ချင်းတွေဆီကရတဲ့ ရီဒါဘွတ်ခ်လေးကို တင်ပေးထားတာပါ။
အခြားစာအုပ်ကောင်းတွေလည်းရှိပါသေးတယ်တယ်။အားတာနဲ့ချက်ချင်းတင်ပေးပါမယ်။ လိုအပ်တာရှိရင်လည်း တောင်းနိုင်ပါတယ်။
VB Script နဲ့ပက်သက်ပီး မြန်မာ ပြန်ရှီလားခင်ဗျာ
English version လိုတော့ရှီပါတယ် ဒါပေမဲ့ တော်တော်စိမ်း နေလိုပါ
I also want VB.Net E-books because I am now attending that. I request you to upload for me and all of MZ member who is learning.
Don't share ebook or software if nobody request. You can find free book websites on <a href="http://www.hongkiat.com/blog/20-best-websites-to-download-free-e-books/">here</a>; too . We are welcome for discussion or asking question instead.